बोइङको त्रैमासिक घाटा दुई अर्ब ९ करोड डलर
बोइङले दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा २.८ अर्ब डलरको घाटा भएको जनाएको छ । दुई भयानक दुर्घटनापछि फ्लागशिप ७३७ म्याक्स जेट ग्राउण्डेड भएकाले यो घाटा हालसम्मकै खराब हो । अघिल्लो कारोबार अवधिको तुलनामा बोइङको स...
नाइजेरिया आतंकवाद : बोको हराम कमजोर, माग्रेव हावी !
एजेन्सी । एक दशक देखि हजारौं मानिसहरुलाई मारिरहेको इस्लामिक आतंकवादी समूह 'बोको हराम'लाई पछी पार्दै नयाँ आतंकवादी समूहले जन्म लिएको नाइजेरियाको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबा...
प्रहरी अधिकृत लक्षित क्वेटा विस्फोटमा पाँचको मृत्यु
एजेन्सी । पाकिस्तानको अशान्त बलूचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटामा एक विस्फोट हुँदा दुई प्रहरी अधिकृत सहित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीको गाडीलाई निशाना बनाइ गरिएको विस्फोटमा परि अन्य ३८ जना सख्त...
उत्तर कोरियाले पुन: किन शुरु गर्यो मिसाइल प्रक्षेपण ?
एजेन्सी । एक हप्ताको अवधि भित्रै उत्तर कोरियाले दुई पटक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ । उत्तर कोरियाले आज(बुधबार) छोटो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण कोरियालाई सैन्य अधिकारीका अनुसार...
पाकिस्तानमा वर्षाको वितण्डा: मृत्यु हुनेको संख्या १६ पुग्यो
एजेन्सी । पाकिस्तानमा गए राति देखि लगातार वर्षा भइरहेको छ । सरकारी अधिकारिले पाकिस्तानी सञ्चार माध्यम डनलाई बताएअनुसार पाकिस्तानको विभिन्न क्षेत्रहरु डुबानमा पर्दा हालसम्म १६ जनाको मृत्यु भइसकेक...
सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । पाकिस्तानको राउलपिन्डी शहरमा एक सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा कम्तिमा पनि १७ जनाको मृत्यु भएको छ ।राजधानी इस्लामावाद नजिकैको प्रन्जाव प्रान्त अवस्थित सैन्य आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटना भएको विमा...
गिलरोय गार्लिक फेस्टिभलमा गोलीबारी: ६ वर्षीय बालक सहित तीन जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा गएराति गिलरोय गार्लिक फेस्टिभलका क्रममा गोलीबारी हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १५ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा एक ६ वर्षीय बालक समेत परेको गिलरोय...
बोको हरामको सैन्य फौजले ६५ जना सर्वसाधारण मारे
एजेन्सी । नाइजेरियामा बोको हरामका सैन्य फौजले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा कम्तिमा पनि ६५ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मुलुकको उत्तरपूर्वी राज्य ब्रोनोमा मुख्य सहर मैडुगुरीमा मोटरसाइकल त...
ट्रम्पसँग मतभेद भएका अमेरिकी खुफिया विभागका प्रमुखले दिए राजनीमा
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रिय खुफिया विभागका प्रमुख डान कोट्‍सले राजीनामा दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासन छोड्ने पछिल्लो उच्च पदस्थ व्यक्ति कोट्‍स रहेको बीबीसीले जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले राजीनामा दिए ...
विश्वको महङ्गो तरल पदार्थको व्यापार गर्दै अफगानिस्तान
एजेन्सी । अफगानिस्तानले पहिलोपटक विश्वको सबैभन्दा महङ्गो तरल पदार्थ अर्थात बिच्छीको विष अर्थात् ‘भेनोम’ अमेरिकालाई निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको मूल्य प्रति ग्यालोन ३ करोड ९० लाख डलर रहेको छ ...
न्युयोर्कमा हिन्दु पुजारीको हत्या प्रयास
एजेन्सी । अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको फ्लोर पार्क इलाकामा एकजना हिन्दु पुजारीको हत्या गर्ने प्रयास भएको छ । शिवशक्ति पीठका पुजारी हरिशचन्द्र पुरी आक्रमणका कारण उनी गम्भीर घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ । ...
एजेन्सी । जापानको होन्सु टापुमा ६.३ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । जापानको सबैभन्दा ठूलो र धेरै जनसंख्या भएको होन्सु टापुमा स्थानीय समयअनुसार आइतबार सबेरै भूकम्प गएको हो । भूकम्पको केन्द्र...
फ्रान्समा फेला पर्‍यो भीमकाय डाइनोसरको तिघ्राको हड्डी
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरूले दक्षिण-पश्चिमी फ्रान्सस्थित एउटा उत्खनन क्षेत्रमा भीमकाय डाइनोसरको तिघ्राको हड्डी फेला पारेका छन्।तिघ्राको दुई मिटर लामो हड्डी औँजेक क्षेत्रमा फेला पारिएको र त्यो सोरापाड डाइन...
फिलिपिन्समा लगातार दुइवटा भूकम्प, मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो
एजेन्सी । फिलिपिन्सको एक प्रान्तमा दुई पटक भूकम्प जाँदा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौँ घाइते भएका छन् । शनिवार सबेरै देशको उत्तरमा पर्ने बातानेस प्रान्तमा ५. ४ र ५. ९ म्याग्निट्युडको भूकम्प ...
पछिल्ला दश दिनमा सिरियामा एक सय जनाको मृत्यु !
एजेन्सी । संयुक्त राष्टसंघीय मानवअधिकार आयोगकी प्रमुख मिशेल बेचलेटका अनुसार पछिल्ला दश दिनमा सिरियामा एक सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा २६ जना बालबालिका रहेका छन् । उनका अनुसार सिरिया र रुस...
एजेन्सी । तपाइँलाई एकदम भोक लागेको छ । रेस्टुरेन्टमा पुग्नासाथ भोक भगाउने मासु अर्डर गर्नुभयो । तपाइँको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर वेटरले निकै छिटो तयारी मासु राखीदियो । प्लेट नै खाउँला झैं गरि भोकले चुर...
अमेरिकाले सुनायो पाँच जनालाई मृत्युदण्डको फैसला
एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न अपराधमा संलग्न ५ व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने भएको छ । ले पहिलो पटक हो । तोकिएका व्यक्तिहरुलाई डिसेम्बर २०१९ र जनवरी २०२०मा मृत्युदण्ड दिइने जनाइएको छ ...
डुंगा दुर्घटना: १५० जनाको मृत्यु
एजेन्सी । उत्तर अफ्रिकी देश लिबियाको तटीय क्षेत्र नजिक शरणार्थी सवार एक डुंगा दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा करिब १ सय ५० जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ भने अन्य १ सय ५० जनालाई माछा मार्नेहरुले उद्दार...
नासा मिसन कन्ट्रोलरुम निर्माणकर्ता क्रिस्टाेफर कोलम्बस क्राफ्टको निधन
एजेन्सी । अन्तरिक्ष इतिहासमा महत्वपूर्ण क्षणमध्य एक क्षणमा नासाको उडान निर्देशक रहेका क्रिस्टाेफर कोलम्बस जुनियरको निधन भएको छ । नासा मिसन कन्ट्रोलरुम निर्माणकर्ता क्रिस्टोफर ९५ वर्षका थिए । नासाको म...
‘अफगानिस्तान युद्ध एक हप्तामा जित्न सक्छौं, एक करोड मानिस मार्न चाहदैनौं !’ – राष्ट्रपति ट्रम्प
एजेन्सी । लगभग १८ वर्षदेखि तालिवानसँग चल्दै आएको युद्ध सम्झौता मार्फत समाप्त गर्न चाहना राख्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत सोमबार आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन गर्दै नयाँपन देखाएका छन् । अफगानिस...